Namuhla isinqumo ukwaba ezintathu izinhlobo ulwelwesi jackets - kuncike ohlotsheni Indwangu esetshenziselwa lokuthunga. Khumbula ukuthi izinto yenza izambatho elingenhla ungqimba umsebenzi, esivikela umuntu ngenxa yamakhaza futhi ngesikhathi esifanayo kususa umswakama, hhayi sivumele yona manzi. Ngokwakha zonke nolwelwesi zihlukaniswe besporovye, Pore futhi kuhlanganiswe.
Izici besporovyh ulwelwesi jackets
Indwangu "umsebenzi" okunjalo isimiso Osmosis: ukuhwamuka, ehlela phezu ingaphakathi ulwelwesi, kuthiwa imali kwi-ke uhambe ngaphandle nge okusheshayo asebenzayo. Izinzuzo cross-exhumene kuwo eziningi izingubo zangaphandle: ibhantshi ngeke zidinga ukuthi sverhberezhnogo ukunakekelwa futhi siphile isikhathi eside ngokwanele. Futhi uzinake kuyinto ezahlukene okushisa lapho ke ongasebenza ngayo. Akumangalisi-ke ukuthi imikhiqizo, wenza lokhu Indwangu, libhekene amba eqolo. Nokho, nabo babe nemiphumela ethile engathandeki eziningana, isibonelo, wakha phakathi vaporization ukudala i umphumela ukuthola ezimanzi.
Syech kusuka ulwelwesi Indwangu ikhule ezimbotsheni ukusebenza ngendlela elandelayo: umswakama eqoqwe ngaphandle nolwelwesi engakwazi ukuya ngaphakathi ngenxa yobukhulu encane ikhule ezimbotsheni nomjuluko ivelele kusuka ngaphakathi izinto, ukuboniswa ngokukhululekile phezu. Lesi simo esiyingqayizivele sibangelwa kuchazwe kakhulu ukumane: amangqamuzana umusi akhicitwe nakuchubeka ukujuluka, ngokuphindwe izikhathi eziyinkulungwane ezincane kuno-molecule yamanzi. Ngakho, sithola manzi esiwuhogelayo ngesikhathi esifanayo izihloko isikhathi uzovuma, ekahle kakhulu. Bawo yaleli ezihlukahlukene ulwelwesi jackets itholakala lokuthi ukuthi "elemiphefumulo" akuyona isikhathi eside: ikhule ezimbotsheni kuthiwa avimbekile ngokushesha, futhi izindawo emangalisayo kwezicubu elahlekile. sidinga futhi handling sibaqaphelisise: uma kungenjalo jacket wageza kahle uqala ukuthola eswakeme ngakhoke ukunakekelwa Kunconywa ukuthenga amathuluzi akhethekile - izifutho, amashampu, njll ...
I izakhiwo esiyinhlanganisela ulwelwesi jackets
Lokhu ndwangu camera phezu ulwelwesi ukungena nakwamanye amazwe, okuyinto yena, unesinye ikhava - besporovuyu polyurethane ifilimu. Lokhu kuvumela jackets ukuhlanganisa zonke izinzuzo owedlule ezimbili ongakhetha, ngenkathi kugwenywa yokuntula kwabo. Yiqiniso, zingabantu ngaleyo ndlela ephakeme kakhulu kunokujwayelekile. Nokho, ukuthenga lo mkhiqizo, ungaqiniseka ukuthi eyokusiza eside ngangokunokwenzeka.
Manje lokho, ngokuphathelene invoyisi. Izinto premium ngokuvamile enikeziwe ngamalebula okudweba nombhalo othi «Rip Stop». Lokhu akulona igama umenzi, kanye nendlela beluka Indwangu. Uma ubheka ngokusebenzisa ingilazi Ukhulisa, uzobona ukuthi intambo ebuhleni nasebubini nokwelukiweyo wafana yegridi bese udala impahla eqinile, kodwa engasindi. Olunye uhlobo aluka - Twill. Indaba ngaleyo ndlela etholwe abushelelezi kakhulu futhi kumnandi ukulifunda nokulilalela touch. Livame ukusetshenziswa uma udala izingubo snowboarding. Ulwelwesi jacket dpm ziyisibonelo esihle kakhulu.
Ekugcineni - amathiphu ambalwa mayelana ezivuzayo. Kahle kahle, kufanele ethe njo ukuqeda ngisho kungenzeka kancane Ukungena ngaphansi izingubo. Ngisho emithathu ungqimba Indwangu jacket ngokuphelele ethe njo ne tape ekhethekile. Lapho uthenga ukubukeka ukuba umbhalo «zonke ezivuzayo uphawu» - kusho ukuthi zonke ezivuzayo empeleni kusetshenzwe.
Disney Villains: scary cartoon abalingiswa
FZ-190 "Ngo-credit nokubambisana": ithebula lokuqukethwe, izimiso, izinguquko kanye nokuphawula
Osikilidi Good eRussia
IPhone 6 ne-iPhone 6 plus: ukuqhathanisa, izici, kweminye imihlobo